“प्रदेशका नाकाहरूमा कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको छ” - Parichaya.com
“प्रदेशका नाकाहरूमा कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको छ”
By परिचय	 On २० बैशाख २०७८, सोमबार १७:२२ 0
कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दो छ । संक्रमितहरु दिन प्रतिदिन थपिएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो अप्डेट अनुसार २४ घण्टामा ७३८ जनाको परीक्षण गर्दा २०३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यो सँगै प्रदेशमा संक्रमित हुनेहरुको संख्या १९ हजार ४ सय २४ पुगेको छ । जसमध्ये अहिले पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या प्रदेशमा २ हजार १ सय ८३ रहेको जानकारी गराइएको छ । कोरोनाबाट प्रदेशमा मृत्यु हुनेहरुको संख्या २ सय ३२ पुगेको छ । प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा समेत गरिएको छ । महामारी रोकथाम भन्दै कास्कीमा गत वैशाख १५ देखि २१ गते सम्म जोरविजोर प्रणालीका आधारमा सवारी चल्ने गरी निषेधाज्ञा गरियो । कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले वैशाख १९ गते सूचना नै जारी गर्दै २१ गते देखि लागू हुने गरी १० दिनका लागि अत्यावश्यक बाहेक अरु सबै सेवा ठप्प हुने जानकारी गराएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशका नाकाहरु कत्तिको सुरक्षित छन् त ? प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन कसरी गरिएको छ ? के अर्काको सुरक्षामा रहेका प्रहरी नै महामारीबाट सुरक्षित छन् त ? लगायतका विषयमा गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक प्रभु प्रसाद ढकालसँग परिचयकर्मी सन्तोष बस्यालले गरेको कुराकानी :
कोरोना महामारीको समयमा गण्डकी प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरी परिचाल के कसरी गरिएको छ ?
प्रदेशका ११ वटा जिल्लाहरुमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयहरु रहेका छन् । ट्राफिक कार्यालयहरु अन्तर्गत ६९ वटा ट्राफिक पोस्टहरु स्थापना गरेर हामीले ११ वटै जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापन हेरिरहेका छौं । विशेष गरी प्रदेशमा शहरी एरियाहरुको ट्राफिक व्यवस्थापन, राजमार्गको ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरणसँगै ग्रामिण भेगको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्राथामिकतामा राखेका छौं । साथसाथै अहिलेको कोरोना महामारीका समयमा यसबाटै बच्दै ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको अवस्था हो ।
कति संख्यामा ट्राफिक प्रहरी परिचालन भएका छन् ?
११ वटै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गरेर अहिले ३३८ जना ट्राफिक प्रहरीहरु कार्यरत रहेका छन् । सबैले ट्राफिक सम्बन्धि आधारभूत तालिमहरु प्राप्त गरेका छन् । अहिलेको समयमा प्रहरी उपरिक्षक देखि लिएर प्रहरी जवानसम्मका प्रहरीहरु फिल्डमा खटिएको अवस्था छ ।
प्रदेशका नाकाहरुमा कत्तिको कडाई गरिएको छ ?
कोरोना महामारीलाई फोकस गरेर प्रदेश सरकारको तालुक प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लगायत सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहित अन्य सरोकारवाला सुरक्षा निकायहरुको पनि समन्वयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु स्थापित गरेर प्रदेशका नाकाहरुमा चेक जाँच गरिएको अवस्था हो । प्रदेशका विन्दुहरुमा नै यात्रुहरुको अभिलेखिकरण गर्ने, सवारीसाधानहरुको अभिलेखिकरण गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धि मापदण्ड प्रयोग गरिएको वा नगरिएको विषयमा हेर्ने कुराहरु भइरहेको छ । कतिपय जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । सो सम्बन्धमा जानकारी दिएर आवश्यक सुरक्षा अप्नाउन आग्रह गरिएको छ । महामारी फैलिन नदिने गरी कडाई गर्ने काम समेत नभएको होइन ।
अर्काको सुरक्षामा खटिएका ट्राफिक प्रहरी नै कत्तिको सुरक्षित छन् त ?
फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने ट्राफिकहरुको सम्पर्क सवारी चालकहरु, आम पैदलयात्रुहरुसँग हुने भएकाले असाध्यै जोखिमपूर्ण रुपमा हामी काम त गरिरहेका छौं । काम गर्ने शिलशिलामा कोभिडबाट बच्नको लागि सुरक्षाका मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा पालना गरिएको अवस्था छ । सबै ट्राफिक प्रहरीहरुले मास्क, पञ्जा अनिवार्य रुपमा लगाएका छन् । काम गर्दा भौतिक दुरीलाई पनि अवलम्बन गरिएको छ । ट्राफिकहरुमा नै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरिएको छ वा छैन भनेर निरन्तर अनुगमन समेत गरिएको अवस्था हो ।
अहिलेको समयमा कोभिडबाट ट्राफिक प्रहरी संक्रमित छन् वा छैनन् ?
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएता पनि ट्राफिक प्रहरीका हकमा अहिले सम्म हामी सुरक्षित छौं । प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीहरु संक्रमित छैनन् । कोरोनाबाट बच्नका लागि निर्धारण गरिएका सुरक्षित मापदण्डहरु अप्नाउने र त्यसलाई पालना गराउने विषयमा तल्लो तहका ट्राफिक प्रहरी सम्म सचेत भएको अवस्था छ ।
फिल्डमा खटिरहँदा आम मानिसको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ ?
पहिले भन्दा अहिले नागरिकहरु सचेत छन् । संक्रमणबाट बच्न सुरक्षाको उपाय अप्नाएको देखिन्छ । सबै नागरिकहरु मास्क लगाएर नै हिँडीरहनुभएको छ । यदाकदा कसैले मास्क नलगाएको खण्डमा हामीले सम्झाई बुझाई गराई मास्क दिएर पठाउने गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने विषय, सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा सिट क्षमता बढी यात्रु नराख्ने कुराहरु,सेनीटाइजर सवारी साधनमा राख्ने विषय सहित आम यात्रुहरुलाई सुरक्षा राख्ने गरी यातायात व्यवसायीहरुले व्यवस्थापन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरामा अनुगमन भइरहेको छ । सवारी साधनहरुमा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएका मापदण्डहरु पूरा भएका छन् वा छैनन् भनेर चेकजाँच गरेका छौं । विगत एक हप्तामा हामीले १५ हजार ३ सय ८ वटा सवारी साधनलाई सो विषयमा चेक जाँच गरेका छौं । आम नागरिकलाई कोभिड सुरक्षा सम्बन्धमा सम्झाउने बुझाउने काम पनि भइरहेको छ । विगत एक हप्तामा ३२ हजार ३ सय ९० जना व्यक्तिहरुलाई सम्झाएका छौं । यसैगरी एक हप्तामा सामाजिक कार्य अन्तर्गत १३ हजार ७ सय ३२ थान मास्कहरु सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराएका छौं । कोरोना महामारीका समयमा अटेर गर्नेलाई संक्रमण ऐन अन्तर्गत रहेर कारबाही समेत गरिएको अवस्था छ । विगत एक हप्तामा ७१ यसरी कारबाहीमा परेका छन् ।
अहिलेको समयमा ट्राफिक प्रहरीमा देखिएको चुनौती के हो ?
अहिलेको समयमा सबैभन्दा बढी चुनौती भनेकै कोरोना महामारीका समयमा कसरी बचेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । जिल्लामा निषेधाज्ञा भएसँगै राजमार्गहरुमा सवारी साधन कम गुडिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा मोटरसाइकल र स्कुटर लगायतका दुई पाङ्ग्रे सवारी गुडाउनेहरुको गति बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय नै चुनौतीको विषय छ । जसका लागि राजमार्ग र शहरी एरियामा ट्राफिक परिचालन बढाएर दुर्घटना हुन नदिन व्यवस्था मिलाइएको अवस्था छ । ग्रामिण भेगमा जीप, ट्याक्टर र ट्रकहरुमा ओबरलोड हुनेगरी मानिसहरु गन्तव्यमा जानुपर्ने बाध्यताले दुर्घटना निम्ताइरहेको अवस्था छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि हाम्रो पहलकदमी जारी छ ।
गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेशबाट संचालित हुन्छ कि केन्द्रबाट ?
हामी अहिले समायोजनको प्रक्रियामा छौं । गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई अहिले राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय भनेर नयाँ नामकरण गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन विधिवत रुपमा भएको छैन । पछि गएर जिल्ला ट्राफिक कार्यालयहरु प्रदेश मातहत रहने र राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय चाहिँ नेपाल प्रहरी मातहत रहने गरी तयारी भइरहेको छ । यद्धपी अहिले प्रक्रियामा नै छ । आधिकारिक निर्णय आएको छैन ।
किन प्रियंकाको फोटो ट्रोल बन्यो ?